Imfanelo edingekayo yendlu ngayinye yizindawo zokugeza zokugeza. Ngaphandle kwabo kunzima ukucabanga ngendawo yokuphumula, ngisho nencane kunabo bonke, ngoba ayilona nje into ewusizo, kodwa futhi i-accessory enhle kakhulu. Muva nje, abaqambi banamuhla baye bavela ezinhlobonhlobo eziningi zemininingwane yokugeza, ngakho-ke khetha into ethile ehlukile, kodwa ngesikhathi esifanayo ukulingana okulungile ngobukhulu nokuma-kulula. Ngakho-ke, manje sizocubungula ukuthi yikuphi uhlobo lokugeza lokukhona lokugezela nokuthi yikuphi okungcono ukukhetha.
Izinto ezinjalo zasendlini zihlukaniswe ngezigaba ezine eziyinhloko. Phakathi kwazo kukhona i-tulip yokugeza, isitsha sokugeza sokugeza, isitsha se-cantilever nesakhiwe ngaphakathi. Ezingxenyeni eziningi nezindlu, imodeli "ye-tulip" iphakanyisiwe - igobolondo elitholakala ku-pedestal. Kungaba nemingcele ehlukene nemibala. Ngisho nezinhlobonhlobo ezinkulu ze "tulip" zinezinga eliphansi lokukhululeka, futhi ngaphansi komlenze walo we-ceramic wonke amapayipi afihliwe.
Ama-washbasins e-Console wokugezela afakwe eludongeni kubakaki. Ngokuvame kakhulu ngaphansi komcengezi kunesidingo esikhulu, lapho kungcono ukugcina amathawula, izinto zokuhlanzeka. Ngenxa yokuthi isitsha sokugeza se-console sithatha ukuba khona kwefenisha yefenisha, kuthatha isikhala esikhulu samahhala, ngakho-ke kuvame ukufakwa ezindlini zangasese lapho indawo yokugezela inkulu khona.
Izitsha zokugeza zokugezela, ezenziwe ngesitsha, zihlale zifakwa kwi-countertop noma i-curbstone. Ubukhulu nokuphakama kwegobolondo elinjalo kuyahlukahluka, ngakho-ke ungakhetha lawo ma parameters azoba ekahle ekhaya lakho. Lemba lokugeza limelela isitsha, ngakho-ke kuvame ukukhethwa ngabantu abadala ukuhlobisa indlu yokugezela . Ukuba nomcabango ocebile, igobolondo elinjalo lingase lenziwe nge-isibambo, lihlotshiswe noma lifakwe enkambini yokuhlanza.
Izitshalo ezakhelwe ngaphakathi - esinye sezixazululo ezinamandla kakhulu zokugezela. Umbhebhe ngokwawo awujulile, njengoba kufakwe njengokungathi ngaphakathi kwe-countertop. Ngaphansi kwalesi sakhiwo kungatholakala amabhokisi noma amashalofu. I-worktop ejikeleze isitsha sokugeza isetshenziswe njengetafula yokuzikhethela izinto zokuhlanzeka.
Noma ngabe iyiphi imodeli oyikhethayo, ubukhulu besitsha sokugeza kudlala indima ebalulekile. Yiqiniso, ezinye izinketho zigxilwe endaweni ehambelanayo, ezinye zidinga i-footage enkulu. Kodwa uma igobolondo le-console lihambelana nendawo yakho yangaphakathi, kodwa indlu yokugezela incane, bese u-oda umklamo onjalo, kodwa gxila ekulinganiseni okuncane.
Lapho sithenga amapayipi, sibheka nekhwalithi yezinto ezivela kuyo. Izitsha zokugeza ezivame ukwenziwa ngamapulangwe kanye ne-faience zenzelwe ukugeza. Amanani okuqala aphezulu kakhulu, kodwa ngesikhathi esifanayo lokho okuqukethwe kuphezulu, kungadlulela amashumi ambalwa eminyaka, futhi akuyona into enobuthi. Izibonelo zezinto zobumba zibhekwa yi-porosity enkulu, evame ukugcwala ukungcola, futhi ishibhile kakhulu. Ngokuvamile, inqubomgomo yentengo yokugeza ibhekene nomkhiqizi, impahla, umsebenzi kanye nomodeli, futhi iqala kusuka ku-ruble 1000.